India: Nibilaogy momba ny safo-drano · Global Voices teny Malagasy
India: Nibilaogy momba ny safo-drano
Voadika ny 13 Novambra 2018 2:27 GMT
Namoaka lahatsoratra momba ny tondra-drano tao Mumbai i Rezwan teo aloha. Mbola nitohy izany…
Tsy voatery hiantoka ny fitantarana ny zava-miseho araka izay irian'ny mpamaky izany mba ho voatatitra ny gazety malalaka sy demokratika. Nitranga tamim-pahanginana ny voina ary ny tena tantara dia voaafina ao ambadiky ny fitantaran'ireo olo-malaza sisa velona na avy amin'ny teoria. Namaly ny fitantarana tsy ampy momba ny Tondra-drano tao Mumbai niaraka tamin'ny fitantarana be herimpo avy eny an-dalambe sy ny fanairana ho an'ny Fampitam-baovao Mahazatra sy ny governemanta tsy mahavaly ny Tontolon'ny Bilaogy Indiana.
Nanosika an'i Amit hanoratra tamin'ny andro nahatonga ny làlambe ho renirano tao an-tanàndehibe ny orambe tsy mbola nisy toa izany. Nampifandray ny zava-nisy henjana i Kiruba ary manana lahatsary garazy ny csf vlog. Manana fitantarana amin'ny antsipiriany momba ny zava-nitranga teo am-pikatonan'ilay tanàndehibe ny bilaogin'i Animesh.
Manolotra ny fitantarany manokana tamin'ny naharaikitra azy tao anaty orana i Ravikiran Rao. Manome ny ampahany amin'ny eritreriny ho an'ny governemanta i atheistbishop. Fitantarana manokana avy amin'i Sonia. Fandalinana momba an'i Mumbai ho toy ny antoko politika sy ny fotodrafitrasany amin'ny fotoana tahaka izao. Ny eritreritra sy ny fihetseham-po nanosika ny lahatsoratra tao amin'ny bilaogin'i Dilip, manomboka amin'ny fitantarana manokana, ny lohahevitra fitantanana ny governemanta sy ny fanamarihana momba ny fanahin'ny (na ny tsy fisian'izany indraindray) tanàndehibe. Rohy mankany amin'ny sary tao amin'ny bilaogin'i Uma ary lahatsoratra iray momba ny toe-tsaina tsy miraharaha isan'andro ao India . Eto ny fandinihina bebe kokoa ny fampitam-baovao lasa adala amin'ny olo-malaza. Misy ny sarin'i Mumbai miaina sy mandalo safo-drano amin'ny aterineto ao amin'ny Flickr .
Saingy ny lafiny tena nahavariana indrindra dia ny fiforonan'ny bilaogy fiaraha-miasa roa. Mifantoka amin'ny fizarana traikefa ny bilaogy fiaraha-miasa toy izany, ary mampifantoka ny saina amin'ny olana manokana, ary ny mba ho re ao anatin'ny tabataban'ireo Fampitam-baovao Mahazatra. Natomboka tamin'ny tanjona mba hanomezana famonjena, fanampiana sy vaovao azo antoka ny Mumbai Help. Manana fitantarana manokana sy ny tantara izay tsy navoakan'ny Fampitam-baovao Mahazatra ny Cloudburst Mumbai.